Ny hafa - iPhone News | Vaovao IPhone
Na dia toa zavatra iray ho an'i Microsoft miaraka amin'ny Windows Phone aza ny tsena finday finday sy takelaka, Apple miaraka amin'ny iOS, Google miaraka amin'ny Android ary Blackberry miaraka amin'ny Blacberry 10, ny hafa koa dia manantona rafi-piasan'ny finday izay te hanandrana azy amin'ny filokana mampidi-doza toy ny fiasa manokana ao amin'ny rahona, safidy fanamboarana vaovao na fomba fiasa ho an'ireo mpampiasa mandroso kokoa izay te hahazo tombony betsaka amin'ny fitaovany. Jereo hoe iza ireo rafitra miasa finday misy mpampiasa maro kokoa ireo.
Tsy isalasalana fa miova be ny tontolon'ny mpanampy hatramin'ny nahitantsika voalohany an'i Siri tamin'ny iPhone ...
Samsung dia te-hiloka amin'ity taona ity matanjaka ary sahy nanolotra fitaovana iray izay, araka ny filazan'ny maro, dia hanamarika ny ...
ny Eder Esteban hace 2 taona .
Koogeek dia iray amin'ireo marika malaza indrindra amin'ny sehatry ny vokatra an-trano. Nihaona tamin'ny…
Tsy mamela ny iray azony hiditra amin'ny iray hafa izy ireo ary raha ny tena izy dia marihina tokoa ny orinasan'i Mark Zuckerberg ...
Fitbit dia nampiditra ny bracelet Charge 3, iray amin'ireo mpifaninana mivantana amin'ny Apple Watch, izay antenainay hisy…
Ny tsiambaratelo dia zavatra manakaiky ny maha-utopia, ary amin'ny ampahany betsaka dia ...
Amazon dia nanjary mpamokatra lehibe indrindra raha miresaka mpandaha-teny marani-tsaina. Ny Akon'ny Amazonanao dia ...
An'i Google nandritra ny fotoana kelikely ny Nest. Na izany aza, araka ny hitanao, izy ireo dia orinasa roa miasa ...
ump Apple dia mikasa ny hanangana orinasa mpamokatra orinasa mpamokatra "lehibe, lehibe, lehibe" any Etazonia. Ny mpanolotsaina ...
Vao nanafika ny Spotify tamina fitoriana roa miampanga ny serivisy misahana ny fandikan-dalàna ho an'ny zon'ny ...